ABACULI ABAHLUKENEYO: I-WIG KWIBHOKISI: IINGOMA EZIVELA KWI-INSPIRED NGUHEDWIG KUNYE NE-ANGRY INCH ALBUM REVIEW - IINDABA
Wig kwiBhokisi: Iingoma ezivela kwaye ziphefumlelwe nguHedwig kunye ne-Angry Inch
Emva kwexesha ngokuhlwanje, amashumi amathandathu okanye abantu kwaye nabani na endinokungena kuye baya kungena kwiphiko lokulinga le ...
Emva kwexesha ngokuhlwanje, amashumi amathandathu okanye abantu kwaye nabani na endinokungena kuye uya kungena kwiphiko lokulinga leCambridge yaseMelika eRepertory Theatre ukubona umculo Hedwig kunye ne-Angry Inch , I-transatlantic, i-transgender umboniso owahamba-Broadway nge-1997 (kunye neHollywood, ukuya kwinqanaba elincinci, kwiminyaka emibini kamva). Imveliso yethu Hedwig bekucwangcisiwe iinyanga ezimbalwa ngoku, ke xa iRekhodi ibhengezwe ebutsheni balo nyaka ukuba bayayidibanisa Hedwig I-albhamu yerhafu ebonisa ukuba ithathe i-The Breeders kunye ne-Yo La Tengo, umvelisi omnye we-pipedream yayikukufumana la maqela ukuba enze kumdlalo wethu-ukuba abe yi-Angry Inch- kwaye (le yayiyimbono yam) ukubiza i-1, 000 yeedola, nokuba $ 2,000 , kwaye uthenge iiCamaros ezimbalwa.
abalimi bagqibela ukutshiza
Akuzange kwenzeke, kunjalo; akukho ziCamaros, amatikiti eneneni asimahla, kwaye irhafu, ngaphandle kokuqalwa kwayo, yaphuma inomdla omncinci omangalisayo. Inesihloko Wig kwiBhokisi , yonke le projekthi intle ngokuthe tye: iqela le-rag-tag ye-indie rockers kunye ne-b-rate yomculo abadumileyo bathatha Hedwig iculo likaJohn Cameron Mitchell noStephen Trask. Ngokomculo, izinto ezenziwayo ziyahluka ngokuya kwiingoma zantlandlolo- ezinye, njengoRufus Wainwright, zihlala zilungile; abanye, njengoBob Mold, ngamathuba okuqhushumba; kwaye uninzi lwabanye lubiyela ukubheja kwabo kwenye indawo phakathi kwezi zinto zimbini zigqithileyo, njengokufumana umfazi acule into eyayiyingoma yendoda njengokwenza ngokungacacanga kweengxabano zesini somlingisi. Oko kwathethi, iingoma ezilungileyo Wig kwiBhokisi zezona ngoma zibalaseleyo kwezomculo uqobo; ekugqibeleni uninzi Hedwig Iingoma azinakufihla imibala yazo eyinyani yomculo, kwaye olu qokelelo, kuwo onke amandla alo eenkwenkwezi, luphuma ikakhulu njengenkcubeko.
Emva kwesigqibo sikaRufus Wainwright 'seMvelaphi yoLuthando', uSleater-Kinney waphinda wenza i-quirky punk fervor ye-Angry Inch yoqobo, encediswa luphawu lwentengiso yempumlo ye-B-52's co-vocalist uFred Schneider ozisa luhlaziye imigca enje 'xa Ndavuka ndenziwa utyando ndandopha apha ezantsi 'ngobukrwada obungathethekiyo. UFrank Black wongeza amazinyo kulwimi olwalungesidlele 'uSugar Daddy', eguqula ukuba ibe yinto eyoyikisayo ye-maniacal, ngelixa i-Polyphonic Spree igcina ubukhazikhazi be-Bowie 'beWig kwiBhokisi', kodwa ngobunono bayifaka ngokumangalisayo iinxalenye zeempondo, uhadi kunye nemigca yepiyano, kunye nomthamo wezandi ezinje nge-E6.
Kukho kubonakala ngathi Wig kwiBhokisi banegalelo kumceli mngeni omkhulu wokukhulula iingoma kumakhamandela omculo, kunye nokubabonelela ngokufana nokuzimela. Isipunu, nangona kunjalo, lelona qela lilapha eliza kuphumelela ngokwenyani koku, lisusa i-'Tear Me Down 'yemidlalo yeqonga enomsindo, ikatala ye-butt-rock kunye nophawu lomculo kwimigca enje,' Ndiyenzile ngaphaya koluhlu olukhulu. ' Into eseleyo igcinwe ngakumbi, ikatala yokuhlambulula iitrayi ezicocekileyo ngokuthe ngqo ngaphezulu komsebenzi ongajongani nawo, njengoko u-Britt Daniel engenzi gingci ekuhambiseni ingoma yengoma ngoku.
Wig kwiBhokisi inesabelo sayo seminikelo yokunqongophala, nayo: zombini iingoma ezintsha- UMitchell noTrask 'iMilford Lake' kunye neRobyn Hitchcock's 'IsiXeko Sabasetyhini' - ziyalityalwa. UJonathan Richman 'Imvelaphi yoThando oluPhindaphindiweyo' iyawohloka ibe yinto engalunganga ngokuphela kwayo, kwaye uCyndi Lauper kunye neMinus 5's bathatha 'iRadio Midnight' bafumana indawo yokuhlanjululwa emnxebeni wama-80s, bezibandakanya ngokungathandekiyo iitram tram kwaye, mhlawumbi ubukhulu becala, ukugwinya iingoma zengoma, ezinokuthi zibandakanye eyona nto inomdla wokuqala. 'Isililo sikaHedwig / Isidumbu esigqibeleleyo', intsebenziswano ekuxoxwe ngayo kakhulu ngokubambisana ngokuvakalayo uYo La Tengo kunye noYoko Ono, ekuqaleni iyathandeka, kodwa ekugqibeleni iyakrwitsha kukungalungi kwayo. Kwaye ngelixa eyokuqala 'ibethelelwe' yayingezizo iingoma ezigqwesileyo, uBob Mold wayixhela nje apha, ethatha indawo yayo nayiphi na into awayenayo ngee-beats zangaphambi kokucwangciswa kwangaphambili kunye ne-Oakenfold ye-zoomers ye-matrix.
Olu qokelelo aluzenzi ngathi luyi-primer okanye intshayelelo ku Hedwig umculo; umbono wokuba icwecwe lomrhumo lifuna ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile ulwazi lwento eyihlawula. Oko kwathethi, nantoni na egcina lo mculo unyanzelisayo kwindawo ephambili yokwazi kufanelekile ukuba unento, kwaye ukuba ungumlandeli Hedwig yenzeka njenge indie rocker ngokunjalo, olu qokelelo ngumtshato omnandi.
I-albhamu entsha elula
isibuko esimnyama miley cyrus
Eyona albhamu i-80s
umntu onezibonda zentsimbi
j cole uluhlu lwealbhamu